Diyaarad Dagaal oo Gantaal ku dhufatay Gaari la sheegay in Al shabaab Muqdisho usoo direen islamarkaan ku rarnayeen… – Dadweynaha Press – Isha wararka sugan
HomeWararkaDiyaarad Dagaal oo Gantaal ku dhufatay Gaari la sheegay in Al shabaab Muqdisho usoo direen islamarkaan ku rarnayeen…
Diyaarad Dagaal oo Gantaal ku dhufatay Gaari la sheegay in Al shabaab Muqdisho usoo direen islamarkaan ku rarnayeen…
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in diyaarado duqeyn ka geysteen Tuulo dhinaca Koofureed ka xigta Magaalada Muqdisho waxaana duqeyntan lala beegsaday saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen halkaas.
Goob joogayaal ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in ay Diyaarado ay duqeeyeen Gaari marayay deegaanka Ilimey oo ka tirsan Shabeelaha Hoose waxaana Gaarigaasi la sheegay in ay ku rarnaayeen Waxyaabaha qarxa oo loo soo waday magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Ku- xigeenka gobolka Sh/hoose Cali Nuur ayaa u sheegay Reuters in duqeyntan lala beegsaday Gaari ay saarnaayen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo marayay meel ku dhow deegaanka Ilimey oo ka tirsan gobolka Sh/hoose.
“Waxaan maqalnay Qarax weyn oo ka dhashay duqeyn diyaaradeed oo lala eegtay Gaari marayay Tuulada Ilimey, kadib waxaa maqalnay Qaraxyo kale oo gaariga ka dhax dhacay oo dhowr xabo ah, waxaan u fahanay in ay sii qarxeyn waxyaabo Gaariga saarnaa” sidaas waxaa yiri qof ku sugan Tuulada Ilimey ee Shabeelaha Hoose una dhaw deegaanka Toora-toorow.
Afhayeenka ciidamada Al-shabaab ayaa beeniyay in la duqeeyay gaari ay lahaayeen Al-Shabaab balse waxa uu sheegay in goob lagu ganacsado ay gantaalo ku dhaceen ayna ku dhinteen illaa 7 ruux oo rayid ah qaar kalana ay ku dhaawacmeen.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay duqeyntan in ay ka dambeeyeen hase ahaatee dowlada Maraykanka ayaa kordhisay duqeyntii ay ka geysanayeen dalka Soomaaliya.